Maitiro ekuisa mapikicha uye mavhidhiyo ku Instagram zviri nyore | ECommerce nhau
Maitiro ekuisa mapikicha uye mavhidhiyo ku Instagram
Iyo pasocial network Instagram Iyo ndeimwe yeanonyanya kurodha pasi uye anoshandiswa maficha pasirese, mashandisiro ayo mune yazvino nguva yakakosha, uye senzira yekuparadzira yezvematongerwo enyika, ezvematongerwo enyika, tsika, zvemitambo uye zvekushambadzira mishandirapamwe, iyo inogamuchira mari yezviuru zvevashandisi pazuva. Kubva chero kupi zvako pasi, angave mafoto, mavhidhiyo kana nyaya, iyo app iyo yakatanga sepurojekiti diki kune vechidiki, yakaguma yave imwe yekubudirira kukuru kwemasocial network, yakazotengwa nemagariro enhau, Mark Zuckerberg. muridzi we Facebook neWhatsApp.
Iyo Instagram application inoita kuti iwanikwe maturusi akanakisa kuti tikwanise kugadzirisa uye kuburitsa zvinyorwa zvedu, kurodha mifananidzo iine nyore kuisirwa mafirita, kutemwa, kugadziridzwa kwemavara, nzvimbo kwayakatorwa, kutara vashandisi vanoonekwa mumufananidzo, pakati pezvimwe zvinhu.
Maitiro e kutumira mafoto Izvo zvinogara zvakafanana, nenzira inoshanda uye yakapusa isu tinokudzidzisa iwe kuzviita uye zvese zviri padhuze zvishandiso iwe zvaunogona kutora mukana nazvo.
1 Maitiro ekuisa mapikicha ku Instagram
1.1 Matipi ekuisa vhidhiyo ku Instagram
2 Deredza huremu uye nekureba kwevhidhiyo.
3 Maitiro ekuisa vhidhiyo ku Instagram
4 Maitiro ekuisa akawanda mavhidhiyo ku Instagram?
4.1 Imwe nzira ndeyekugovana rarama nyaya
Maitiro ekuisa mapikicha ku Instagram
Chinhu chekutanga chaunofanirwa kuita kuisa iko kunyorera, zvakajeka kurodha pasi kubva kuGoogle Store kana App Store, unofanirwa kugadzira account nyowani kana kupinda neakaunti yako yeFacebook, kana yangopinda, muhwindo guru uchaona zvidhori zvishanu pazasi yepaneru, inomiririra zviito zvakati. Iyo inonyanya kukosha ndeye iyo iri pakati pevamwe vese, iwe unofanirwa kudaro dzvanya pane "+" icon kuti uenderere mberi.
Gare gare iwe uchafambira mberi kune iyo nyowani tebhu, uko ese mafoto pane yako nhare anoonekwa. Kana iyo chifananidzo chauri kuda kuisa chiri chazvino, iwe uchakwanisa kuchiwana icho kubva kumabhokisi ekutanga; asi kana iyi isiri iyo kesi, kune zvekare sarudzo yekutarisa nemafolda. Muchikamu chino unogona kusarudza imwe kana yakawanda mifananidzo kuti ibudiswe mubhuku rakafanana, kana uchinge wasarudzwa tinya pane Inotevera.
Nezvo, rimwe jeneti rinozovhura nemufananidzo kana mifananidzo yauri kuenda kurodha, pamwe nesarudzo dzakasiyana dzauinacho kuti uigadzirise. Icho chiri muchikamu chino apo iwe paunogona kuwedzera firita yezvaunoda, kana kugadzirisa saizi yayo, musiyano, kuzadza, kupenya, mimvuri, blur, pakati pedzimwe sarudzo dzakawanda dzaunogona kuyedza, kana iyo shanduro yapera, tinya pane sarudzo "Inotevera".
Nhanho yekupedzisira yekutevera kuti ubudirire kuburitsa mufananidzo ndiyo yakapusa, iwe unongofanirwa kuwedzera chinyorwa chezvaunofunga zvinotsanangura pikicha kana mifananidzo inobatsira kuti unzwisise zvaunoratidza nemufananidzo, nzvimbo yaunogona kusiya isina chinhu, pane sarudzo yako, unogona kuwedzera nzvimbo iyo pikicha yakatorwa, tag vamwe vashandisi vanoonekwa mumufananidzo uye maapplication maunoda kuti agovaniswe panguva imwe chete, senge Facebook, Twitter kana Tumblr, kugadzirisa yako kugadzirwa mumasocial network uye kurodha mune imwechete bhuku, iwo chete mufananidzo kune akasiyana masocial network. Paunenge uine zvese zvagadzirwa, tinya mugove.
Pakarepo iwe unozogona kucherechedza kuti chifananidzo chakaiswa sei kune anoenderana masocial network, uye iwe uchaonawo kuti vako vokukurukura vanotanga kuifarira uye kugadzira vateveri vatsva.
Rangarira kuti Instagram ine mafirita evabereki saka kurodha zvinyorwa zvevakuru zvakarambidzwa zvachose.
Kana iwe uchifunga kuti chifananidzo chako hachitarisike muchikamu chakakodzera kana kuti chinogona kutaridzika zvirinani, unogona kurodha chechitatu-bato kunyorera senge InstaSize, iyo inobvumidza iwe kuisa panoramic mapikicha, kana nezvimwe zviyero zvemifananidzo, uchizvigadzirisa zvizere kune chikamu cheiyo Instagram, kuti ugone kugovana zvese zvemukati zvako pasina zviyero, kanganwa kuti iyo yakazara foto haioneke kana chakakosha chinhu chakatemwa, iwe unogona zvakare kuwedzera Makuru mhedzisiro uye mafuremu kuwedzera yakawanda yekutanga kune ako mapositi.
Pamusoro pekuisa mapikicha kubva kunharembozha yako, pane mukana wekuzvitsikisa kubva pakombuta yako. Kune izvi, kune nzira dzinoverengeka, iyo yatichakudzidzisa pano ndeyekushandisa yekuwedzera Chrome inonzi User-Agent Switcher. Ichi chishandiso chine simba chinozadzisa basa rekushandura mumiririri, chichiita kuti iyo Instagram application itende kuti iro bhuku richaiswa kubva kune yako nhare uye nekudaro chiito chichaitwa pasina kunetsekana kana mutsauko, nekuti chikuva chePC chakangofanana neicho yeiyo nharembozha chete ine pachena yakajeka sikero yakajeka.
Tevere, inotsanangurwa zvakadzama maitiro ekuisa iyo yekuwedzera-on uye kuiisa mukuita kuitira kuti uite chiito chakatsanangurwa kare.
Instagram inobvumidza, nehunyengeri hweGoogle Chrome, iko kuiswa kwemifananidzo pasina dambudziko. Unogona kusarudza chikuva chatiri kufungidzirwa kuti tiri kubhurawuza, kungave kuri Android, senge iOS, Windows Runhare nevamwe, mhedzisiro yacho yakafanana pakati pavo.
Iye zvino, iwe watove wakadzidza kuve nyore kwaungakwanise kuisa chifananidzo, ikozvino zvakakosha kuti iwe uzive kuti iwe unogona zvakare kurodha mavhidhiyo uye nyaya, uye munguva pfupi yapfuura unotova neyako chiteshi nemavhidhiyo akareba.
Matipi ekuisa vhidhiyo ku Instagram
Kugona kuisa mavhidhiyo awakamborekodha unofanirwa kufunga nezvezvimwe zvinhu usati waisa iwo:
Kurema kweiyo vhidhiyo, nekuti iyo Instagram chikuva inongobvumidza iyo kurodha mavhidhiyo madiki pane angangoita 20MB.
Iyo nguva yevhidhiyo inofanirwa kuve inokwana 1 miniti.
Deredza huremu uye nekureba kwevhidhiyo.
Pane zvakawanda zvingasarudzwa paInternet, semuenzaniso, pane mapeji anotibvumidza kumanikidza vhidhiyo kuti ideredze huremu hwayo uye panguva imwechete sarudza masekondi makumi matanhatu atinoda kutsikisa pa Instagram. Rimwe remapeji aya Vhidhiyo Pamhepo - Chinja, ino webhusaiti inokupa iwe sarudzo yekusarudza fomati iyo iwe yaunoda kuendesa kunze pamwe nehurefu, zvakare hauzokwanisi kudarika miniti yakatenderwa, asi kana izvo zvaunofunga kuendesa chiitiko chakazara, unogona kurodha iyo senhau mhenyu, iyo inobvumidza inosvika rinopfuura awa rekurekodha.
Maitiro ekuisa vhidhiyo ku Instagram
Kana tangova nevhidhiyo yedu nekukosha kwenguva uye huremu, tinogona kuiisa kune yedu Instagram nhoroondo, nzira yekuita chiito ichi yakafanana nekuisa mifananidzo, nekudzvanya pane + chiratidzo, kusarudza vhidhiyo yaunoda uye kugona kuigadzirisa kuti upe chitarisiko chakanakisa.
Kana iwe unogona kurodha vhidhiyo kune nyaya, dzinozogara maawa makumi maviri nemana dzichionekwa kune vateveri vako uye zvobva zvanyangarika, chirongwa chakafanana neSpapchat, icho chakawana vateveri vazhinji, vachigovana mifananidzo nemavhidhiyo anosvika gumi nemashanu masekondi ane mafirita uye akakosha mhedzisiro. iyo Iwo ari nyore kwazvo kushandisa, ayo anoratidzwa pazasi muchikamu chenhoroondo yako.
Maitiro ekuisa akawanda mavhidhiyo ku Instagram?
Vanoti hapana miganho yemunhu, uye zvakanaka tinogara tichitsvaga nzira dzekunetesa sisitimu, Instagram hazvisi izvo, saka ini ndichakudzidzisa nzira mbiri tumira mavhidhiyo marefu kuaccount yako.
Iko kiyi ndeye Instagram Nyaya mauri iwe unogona chete kutumira mavhidhiyo anosvika pamasekondi gumi neshanu, asi pane maapplication ayo anokubatsira iwe kurodha vhidhiyo refu, kucheka kuita mavhidhiyo mapfupi emasekondi gumi nemashanu umo kuteedzana kwezvauri kuratidza kusiri kurasikirwa, kuwedzera pakukwanisa kuronga fomati yekuburitsa kuisa panoramic mifananidzo zviri nyore.
Nhau Dzinocheka (inowanika mahara chete kune Android): Iyi sarudzo inokutendera kupfupisa mavhidhiyo ako kune chero hurefu uye kwete chete gumi neshanu-yechipiri clip. Nekudaro, iyo yakati rebei kupfuura iyo iOS app.
Nyaya Yakatsemura (inowanika mahara yeIOS chete): Govanisa mavhidhiyo ako marefu muzvikamu gumi neshanu-zvemasekondi kuti urege kurasikirwa nekuenderera mberi. Iyi yemahara app ine PRO vhezheni, ye $ 15 iyo inokutendera iwe kuti uwedzere izvo zviripo sarudzo uye ugone kurodha akanakisa mavhidhiyo kune yako nyaya.
Imwe nzira ndeyekugovana rarama nyaya
Kana izvo zvauri kuda kugovana chimwe chinhu chiri kuitika panguva ino, zvakanakira kuita rekodhi mhenyu panzvimbo yekuzvinyora nekuisa vhidhiyo gare gare, usarasikirwa nenguva yacho, uye ita izvo izvo zvimwe, kuti zvibatanidzwe nguva dzese nevateveri vako uye zviitiko zvinoitwa iwe kana nekambani yako, nekudaro uchiwana kuwanda maonero, mukana wakakura wekutepfenyura mavhidhiyo aripo ndewekuti inobvumidza iwe kukwira kusvika pa1 awa yezvinyorwa mune imwechete yekurekodha, saka inodzivirira iro basa rekurodha rechitatu-bato kunyorera kuti utore vhidhiyo refu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » evanhu vezvenhau » Maitiro ekuisa mapikicha uye mavhidhiyo ku Instagram
Ndatenda kwazvo neruzivo ini ndanga ndisina ruzivo nenzira yandaifanira kurekodha nayo uye maitiro ekuita zvese zvakanyorwa kuti zvionekwe
Ini handiwani sarudzo yekuisa vhidhiyo kana mufananidzo kubva ku instagram kunyangwe ini ndatoisa iyo YeMushandisi-Agent Switcher yekuwedzera. Ini ndinofanira kutangazve kana chii chandingaite? Ndatenda
Maitiro eSEO ekushandura bhizinesi rako kuita rimwe reE-commerce
Kutengesa muchinjikwa, zano rekutengesa mune ecommerce